ma naing naing says:
English version : http://www.wutyeefoodhouse.com/en
Than Hlaing says:
အရမ်းတော်တဲ့ဝတ်ရည်လေးရေ ချီးကျူးပါတယ်နော် 🙂
မအိသက်ကို မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်.. Thanksalot.. 😛
Than Darlay says:
အမ ကြင်မဆိုင်ဟင်းရည် ချက်တာလေးတင်ပေးပါအုန်းရှင့်
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်.. 🙂
I’m terribly in-loved with your food preparations as well as the presentations in monthly ‘Food’ magazines. I did had tried some new menus. I wish to know ‘In which restaurant in Yangon that we can come and enjoy your delicious foods?’ (or) Will one be opened soon?
haa Thanks also sis.. I don’t have any plan to open. But Thank you! 🙂
မရေ Food Magazine က Website ရှိလားဟင်။ ရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်။
၀က်ဆိုက်တော့ မသိဘူး။ ဖေ့ဘုတ်မှာပဲ ရှိတယ်.. 🙂
အရမ်းကြိုက်တယ်မ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် အားပေးနေတယ်နော်
မမဆိုဒ်ကို နောက်ဆိုအမြဲလာကြည့်ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ် ^-^ အရမ်းရမ်းမိုက်တယ်
Food magazine ကို စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းမှာ ၀ယ်လို့ရမလား….?
ဟုတ်ကဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းမှာ ၀ယ်နိုင်သလို၊ city mart မှာလည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ်.. အားပေးမယ်ဆိုလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်… 🙂
He thaw says:
Wow, same hobby. So thank you for sharing …
Think I’ll cook for my beloved one 😛
haa Thanks 🙂
ညီမငယ် မဝတ်ရည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သဘောကျနေတာကြာပါပြီ ဒါ့ ကြောင့် ကိုဂေါ်လီဆိုတဲ့ 
အကိုယ့် တို့ ရဲ့ သတင်းစာဝေမျှသော ဘလောက်စပေါ့ လေးမှာလည်း နောက်လူလူတွေဖတ်လို့ ရအောင်
လင့်ချိတ်ပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း အထူးကျေးဇူးပါနော်
Zarchi Phyo says:
ဝတ်ရည်ရေ…where can I order food magazine? I mean door to door system. By the way where do u live in Yangon? Can I do ur friend? If I can I will visit to u with my little boy… especially to eat!!!Hee Hee
Food Magazine ကို အမှတ်(၉၄)၊ ၃ လွှာ၊ (၃၉)လမ်း(အောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ph: 01-25412 မှာဖုန်းဆက်ပြီ အိမ်အရောက်ပို့စနစ်နဲ့ မှာလို့ရပါတယ်။ ဟုတ်၊ ၀တ်ရည်က ပါရမီနေပါတယ်၊ အားရင် လာလည်လို့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ.. 😀
Ph no. တစ်လုံးလိုနေတယ်ထင်တယ် ဝတ်ရည်
Sorry sis.. phone no is 254127 par.. Thanks 🙂
Ok! ပါရမီလမ်းဆုံရောက်ရင် ဝတ်ရည် ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်နော်
ဒင်းဆမ်း အမျိုးအစားက အများကြီးပါပဲ.. 🙂
Su ko ko says:
ဝတ်ရည်ကပါရမီမှာနေတယ်ဆိုလို့ဒို့လဲပါရမီကို ၂၀၁၃ အလယ်လောက်ပြောင်းနေမှာပါ လမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်မယ်နော်။ ညီမလေးရဲ့ ချက်နည်းပြုတ်နည်းစာအု
ပ်သီးသန့်ရှိလား အမ သိမ်းထားချင်လို့ပါ။
အစ်မ ဒီဇင်ဘာလကုန် ၀တ်ရည် ဟင်းချက်စာအုပ် ထုတ်မှာပါ။ စာအုပ်ထွက်တာနဲ့ မကို လှမ်းအကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော် 😀
တရုပ်မုန့်လုပ်နည်းစာအုပ်လိုချင်တယ် ရမလာ အမ ကိတ်တိုပေါင်မုန့်တိုလုပ်တာလေ
You can find bakery book @Popular book shop
ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ထွက်ရင် ညီမကိုလည်း အသိပေးပါဦးရှင်… ကျေးဇူးပြု၍ မေးလ်ထဲ ပို့ပေးပါ… ပြီးတော့ မန္တလေးက စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရ/မရ… ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ဆိုတာလေးလည်း ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပေးပါဦးရှင်….
ဟုတ်ကဲ့ စာအုပ်ထွက်တာနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါ့မယ် ညီမရေ… အားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်.. 😀
စာအုပ်ထွက်ရင် အီးမေးလ် ပို့ပြီး အကြောင်းကြားပေးလို့ရရင်
ဟုတ်ကဲ့ အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်… ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ 😛
Nan Wai says:
ဟုတ်ကဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ
ကောင်မလေးက အမဆီမှာ ဟင်းချက်နည်းတွေ အများကြီးတောင်းတော့မှာသေချာပါတယ် အိမ်ထောင်ပစည်းထားသိုနည်း၊ဟင်းပွဲပြင်ဆင်နည်းတွေကို သင်မသေချာပါတယ်
sis ရေ ဟင်းချက်စာအုပ် အားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ Wutyee Food House (၁၀၁)မျိုး ချက်နည်းစာအုပ်က ၄၀၀၀ကျပ်ပါ။ နောက်လထဲ စာအုပ်(၁၀၂)မျိုး အသစ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက တူတူပါပဲ။ ကျေးဇူးပါ.. 😉
အစ်မ ဆန်ချို အေး လုပ်နည်း သိရင် တင်ပေးပါ လား…..Plz….
Thaw Lin Thide says:
Where can i find your book.
bro စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းနဲ့ CityMart Ocean မှာမေးဝယ်လို့ရပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. 🙂
City mart နဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းမှာ မေးဝယ်လို့ရါပတယ်. Thanks 😀
Nway hnin says: